मेरो २८ वर्षको अनुभवले मुक्तिनाथ विकास बैकलाई अब्बल बनाउन सहयोग पुगेको छ : प्रधुम्न पोखरेल पोखरेल, सिइओ, मुक्तिनाथ विकास बैंक — Motivate News
काठमाडौँ – विगत २८ वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत प्रद्युमन पोखरेल मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् । उनले वाणिज्य शास्त्रमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका छन् । पोखरेलले सुरुमा नबिल बैंकमा म्यानेजरबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका हुन् । उनले नबिल बैंकमा करिब १९ वर्षसम्म काम गरे । त्यसपछि ६ वर्ष मेगा बैंकमा सहायक महाप्रबन्धकको रुपमा कार्यरत रहे भने ०७३ मंसिर १९ देखि मुक्तिनाथ विकास बैकमा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा प्रवेश गरेका पोखरेल २०७५ जेठदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा कार्यरत छन् । मुख्यगरी बैकिङ विषयमा उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
लामो समयसम्म कर्मसियल बैंकमा काम गर्नुभयो, अहिले विकास बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर जिम्मेवारी बहन गरिरहनुभएको छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
करिब २८ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा रहेर काम गरें । यो अवधिमा मैले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएँ । वाणिज्य बैंकमा रहेर प्राप्त गरेको कार्यअनुभवलाई मुक्तिनाथ बैंकमा प्रयोग गर्नेछु । त्यो अनुभवलाई पूर्ण रुपमा यहाँ सदुपयोग गर्नेछु । मलाई बैकिङ सम्बन्धी ज्ञान भएकोले जुनसुकै बैंकमा पनि काम गरेर परिणाम दिन सक्छु जस्तो लाग्छ ।
तपाईको बैंकिङ क्षेत्रको यात्रा कस्तो रह्यो ?
जब काममा रमाइलो लाग्छ तब मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ । जुन कारण आज म यो स्थानमा छु । नबिल बैंक (तत्कालीन नेपाल अरब बैंक) देखि सुरु भएको ‘बैंकिङ करिअर’ यात्रा एकदमै स्मरणयोग्य रह्यो । म्यानेजरदेखि सुरु भएको यात्रा चुनौतीपूर्ण तर सुखद रह्यो । यसबीचमा ६ वर्ष मेगा बैंकमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरे । मैले आफूले प्राप्त गरेको त्यो सफलताको धेरथोर स्वाद चाख्ने मौका पाएँ । राम्रो काम गरेकै कारण हाल मुक्तिनाथ विकास बैंकको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाएको हो ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको चुक्ता पुँजी के– कति रहेको छ ?
गत चैत मसान्तसम्म बैंकको दुई अर्ब ५९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको छ । जबकि राष्ट्र बैंकले केन्द्रीय स्तरको विकास बैंकको मान्यता पाउन असार मसान्तसम्म अढाइ अर्बको लक्ष्य तोकेको छ । त्यस्तै, हाल बैंकसमक्ष २४ अर्ब ५४ करोड कूल निक्षेप रहेको छ । कर्जा लगानीतर्फ २१ अर्ब ९९ करोड छ । बैंकको छ लाख ग्राहकसँग कारोबार छ । एक लाखभन्दा बढि लघुवित्ततर्फका ग्राहक सदस्यहरु आबद्ध छन् । अर्काे कुरा भनेको कुनै पनि बैंकको व्यापार तथा कारोबार कस्तो भन्ने हुन्छ । यस सवालमा बैंैकको निष्क्रिय कर्जाको कुरा उठान हुन्छ । तर, मुक्तिनाथसँग यो कर्जा जिरो प्रतिशत छ ।
बैंकले यस वर्ष शेयरधनी तथा लगानीकर्तालाई कति बोनस र लाभांश वितरण गर्दैछ ?
यी सबै अधिकार सञ्चालक समितिसमक्ष हुन्छ । यसको व्यवस्थापनतर्फ हामीले सहयोग गर्ने हो । र, यो वर्ष पनि बैंकले उत्साहजनक बोनस र लाभांश बाँड्दैछ । र, चैत मसान्तभित्र बैंकले ४२ करोड ७५ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ ।
बैंकको हालसम्म कतिवटा शाखाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ?
शाखा विस्तारभन्दा पनि उपस्थिति दरिलो र अर्थतन्त्रलाई मजबुत पारेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म हाम्रो बैंकले ८३ स्थानमा शाखाहरु स्थापना भइसकेका छन् । अरु बैंक नगएका स्थानमा पुगेर सेवा दिने बैंकको मुख्य मिसन हो ।
नेपालमा धेरै विकास बैंकहरु छन् । मुक्तिनाथ विकास बैक कुन स्थानमा छ ?
हामीले सुरुमा कुनै बैंक वा संस्थाको पृष्ठभूमि बुझ्न अपरिहार्य हुन्छ । मुक्तिनाथको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रोमा तीन कुराहरु समेटिन्छन् । एउटा ऐतिहासिक, दोस्रो अग्रगामी र कार्यशैली र तेस्रो सिद्धान्त हो । यो बैंक ०६३ सालमा स्याङ्जाको पुतलीबजारमा तीन जिल्ले बैंकबाट स्थापना भएको बैंक हो । बैंकले ०६९ सालमा पोखरामा दश जिल्ले बैंकको अनुमति प्राप्त ग¥यो भने ०७२ सालमा मात्र केन्द्रीय स्तरको मान्यता पाएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको चार वटा क्याटोगोरी( ए, बी, सी र डी) सबैलाई अंगीकार गर्दै ग्राहकलाई सरल र छरितो ढंगले सेवा प्रदान गर्ने काममा हाम्रो बैंक अग्रस्थानमा छ । र, अर्काे कुरा मुक्तिनाथको कूल व्यापारको ३० प्रतिशत अंश ग्रामीण भेगमा रहेको छ । यस बैंकको मुख्य नारा नै ‘जनता बैंकमा होइन बैंक जनतासमक्ष पुग्नुपर्छ’ भन्ने हो ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा आर्थिक तरलता कम भन्ने सुनिन्छ । के यो समस्या मुक्तिनाथ बैंकमा पनि छ ?
आर्थिक तरलता र सकुंचनको कुरा गर्दा राष्ट्र बैंकको विवरण हेर्न आवश्यक छ । मुक्तिनाथको सन्दर्भमा नौ महिनाको अवधिमा बैंकले निक्षेप रकमभन्दा ९५ अर्ब बढीले कर्जा लगानी बढेको छ । त्यस्तै, हाल मुलुकमा मासिक एक सय चार अर्बको विदेशी व्यापार रहेको छ । जसमध्ये ९७ करोड आयात हुन्छ । तर, ९० करोड व्यापार छ । यो नौ महिनाको अवधिमा पाँच सय ४० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो राज्यमा देखिएको एउटा पाटो भयो । मुक्तिनाथको कुरा गर्दा हालसम्म यो सन्दर्भमा त्यस्तो खालको कुनै चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छैन ।
नेपाल संघीयतामा गइसकेको छ, मुक्तिनाथ विकास बैंकले सबै प्रदेशहरुमा जान कस्तो खालको तयारी गरिरहेको छ ?
मैले माथि अघि नै भनिसकेको छु । हाल ५० प्रतिशतभन्दा बढी बैंकिङ सेवा ग्रामीण भेगबाट भइरहेका छन् । हाम्रो बैंकले उत्पादनशील र सीपमूलक क्षेत्रमा लगानीमा विशेष जोड दिएको छ । यसरी सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नै रहेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा थप आफ्नो दायरा बढाउने क्रममा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।
तपाइँ विकास बैंकर्स संघको महासचिव पनि हुनुहुन्छ । विकास बैंक आफैँले श्रोत पहिचान गरेर ग्राहकवर्गमाझ पुग्नुपर्ने अवस्था छ भने राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा अंकुश पनि लगाएको छ । यसबारेमा तपाइँको धारणा के हो ?
हो । यस विषयमा छाता संघले भरपुर मात्रामा आवाज उठान गर्दै आएको छ । यद्यपि वाणिज्य बैंकहरु झैँ विकास बैंकलाई पनि सरकारले अधिकार प्रदान गर्नेछ । र, को सँग कसरी काम गर्ने भनेर तह छुट्ट्याइनुभन्दा पनि संस्थाको आर्थिक पुँजी र तरलता कस्तो छ भन्ने कुरा नै मुख्य हो ।
विकास बैंकका मुख्य समस्याहरु के – के हुन् ?
सर्वप्रथम विकास बैंकको आयस्रोत वाणिज्य बैंकभन्दा कम रहेको छ । विकास बैंकहरुलाई एलसी कारोबार गर्न अनुमति दिइएको छैन । अहिले लगभग १७ प्रतिशतको हाराहारीमा घटिबढी देखिएको छ आगामी केही समयपछि यी समस्याहरु आफैं समाधान हुन्छन् ।
अन्तमा, यस मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई अगाडि बढाउन के कस्ता योजनाहरु ल्याउनुभएको छ ?
अरु विकास बैंकभन्दा अब्बल बैंक बनाउन बैंकको व्यापार नीति, शाखा विस्तारमा ध्यान दिने योजना छ । यसका साथै बैंकलाई अरुभन्दा सक्षम बनाउन आवश्यक पर्ने समग्र विषयमाथि हाम्रो अर्जुनदृष्टि रहेको छ । कुनै पनि बैंक अरुभन्दा राम्रो बनाउन धेरै पक्षको महत्वपूर्ण भूमिकाहरु हुन्छ । हामीले यसलाई राम्ररी मनन गरेका छौं ।
Posted in अन्तर्वार्ता, सफलता, समाचार | Tagged नबिल बैंक, प्रद्युमन पोखरेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सालिकराम भण्डारीले, मुक्तिनाथ विकास बैंक, मेगा बैंकमा, विकास बैंकर्स संघ | Leaveareply